Shiinaha Sariir Sariirta Sariirta Sariirta adag ee Sariirta jiifka Sariir Amiirad sariirta # 0114 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
Sariirta Sariirta Sariirta ee Sunta Sariirta Sariirta Sariirta Sariirta Princess # 0114
Qaabka ： Reer Yurub
Magaca: Sariirta jiifka
Lambarka tusaalaha: Amac-0114
Cabir: 1980mm * 2120 * 980mm
Windsor sariirta qoryaha adag ee gadaal loo dhigo
Sidee loo abuuraa qol jiif oo nasasho leh? Isbeddelku wuxuu ka bilaabmayaa doorashada madax-madaxeed u eg xargo. Sariirta oo dhan waxay ka samaysan tahay dhammaan qoryaha adag. alwaaxyo ku saleysan alwaax? Veneer? Midkoodna ma jiro, bey'ad adag oo bey'adeed u roon bay'adda, markaa waad u adeegsan kartaa si kalsooni leh. Qalabka ugu muhiimsan waa geed, oo waxaad ku raaxeysan kartaa dabeecadda dabiiciga ah ee jilicsan xagal kasta. Ma jiro ur gaar ah, oo caraf udgoon qafiif ah ayaa uumi baxaysa, taas oo ku siinaysa inaad ku raaxaysato kaynta cagaaran.
Gogosha sariirta adag ee alwaaxa leh waxay si adag u qaadataa culeyska
Adag ee geedku waa mid aad u wanaagsan. Lama rinjiyeyn ama lama caleemo saarin ka hor inta aysan ka bixin warshadda, markaa waad ku seexan kartaa nabad. Loox walboo sariir ah si adag ayaa loo habeeyay, iyada oo loo maro habka loo yaqaan 'tenon' iyo 'tenon', taas oo si weyn u wanaajisa awoodda taageerada ee sariirta. Jirka oo dhan ayaa si taxaddar leh loo safeeyey si uu kuugu soo gaadhsiiyo alaab jilicsan oo jilicsan. Ma jiraan baararka, iyo quruxda asalka ah ee qoryaha alwaaxda ayaa si weyn loo hayaa, taas oo kuu oggolaaneysa inaad dareento quruxda dabiiciga ah ee guriga.
Ilaalin sarreysa sariirta dhammaadkeeda
Sariirta dusheeda iyo cagaha sariirta waxaa lagu hagaajiyay qaab dhismeed qalab tayo sare leh leh si loo hubiyo in sariirta qoryaha adag aysan sahlaneyn in la ruxo. Marka lagu daro lugaha sariirta, waxay baabi’ineysaa dareenka culeyska badan wuxuuna leeyahay xoog iyo qurux labadaba. Waxaan sifeynay gees kasta inay ahaato mid wareegsan oo siman oo aan lahayn nabarro. Qalab tayo sare leh Ma jiri doonaan dhibaatooyin sida miridhku, buuq, iwm, si laguugu abuuro jawi deggan oo deggan oo deggan guriga.
Hal-dhudhun lugaha dhumuc leh
Hal-cuf adag oo lugaha oo alwaax adag leh, xagal u janjeedha cilmiyaysan, culeys badan oo xambaarsan. Gunta hoose waxay leedahay suuf la dareemay, oo ku habboon in la dhaqaaqo, oo aan soo saarin dhawaaq, yaraynaya isku dhaca lugaha ee sagxaddaada iyo lugaha sariirta, waxayna kordhisaa nolosha adeegga. Hollowed The Windsor backrest wuxuu ka dhigayaa guud ahaan meesha banaan mid fudud oo fudud, mana xayiri doono warqaddaada darbiga ah.
U daa meel ku filan oo keyd ah xagga hoose
Sariirta kore waxay ka samaysan tahay geed adag oo qaro weyn, oo xasilloon oo adag, kana dhigaya sariirta oo dhan mid adag. Dhererka ku filan ee dhulka ayaa ka dhigi kara booska ugu hooseeya ee la heli karo. Dhig qaar ka mid ah sanaadiiqda wax lagu kaydiyo iyo dhawr kabood oo kabo ah, laakiin laguuguma talinayo inaad buuxiso. Tani ma noqon doonto mid ku habboon hawo qaadashada furaashka. Kordhi furaashka qafiifka ah ee raaxada leh si aad u abuurto sariiraha jiifka raaxada leh, waxaadna ku gaari kartaa waxyaabaha miiska sariirta dhinaceeda ah adiga oo fidinaya.
Hore: White Oak Multifunctional Double Sariid adag Sariir jiifka jiifka # 0113
Xiga: Shiinaha Factory 8M 10M Midabee Habee Hawada Trick Barkadda Ballaaran Yoga Mat 0395
Kabiin adag alwaax jikada jikada qayb qayb ...
Qalabka Miiska Kombuyuutarka Fudud ee Fudud ee Qalabka Qalabka 0314
2020 cusub SUP surfboard firaaqada cusub s ...
Nordic Light Raaxo Farshaxan Guryaha Nakhshadda ah ...
Nordic minimalist geed alwaax adag alwaax adag ap yar ...
House Wood Deluxe oo Kabireysan oo leh Barxad iyo ...